Cryptocurrencies na usoro ugwo ohuru | ECommerce ozi ọma
Ọganihu nke cryptocurrencies bụ otu n'ime isiokwu kachasị na ego maka ihe karịrị afọ iri, kemgbe ibipụta akwụkwọ Satoshi Nakamoto na 2008, bụ nke ekwuru usoro nkwụnye ụgwọ izizi nke mbụ n'etiti ndị ọgbọ.
Mana n'agbanyeghị isi okwu na ndị na-akwado Bitcoin na mkpuchi ndị ọzọ enwetala, otu n'ime nkatọ bụ isi e megidere ha bụ na ha abụghị ego n'eziokwu, n'ihi na ha enweghị uru dị oke ọnụ karịa ịbụ ụlọ ahịa akụ na ụba. ahia.
Maka cryptocurrencies ka ọ bụrụ ihe ọzọ a ga-ekwenye na ego fiat, ha ga-eme ka itolite site na inwe uru ịbụ ụzọ ịkwụ ụgwọ a nabatara ebe niile, ma n'ịntanetị ma n'okporo ámá.
1 Agụụ maka ịkwụ ụgwọ crypto
2 Otu esi anabata cryptocurrencies
3 Kaadị akwụ ụgwọ
5 Mgbanwe dijitalụ
6 Ebee ka ịmalite na Cryptocurrency?
7 Kedu ihe kpatara iji Bitcoin?
8 Mkpụrụ ego ọgbọ ọhụrụ
9 Ekwentị ego cryptocurrency
10 Borderkwụ ụgwọ ókèala
11 Ajụjụ nke nchekwa
Agụụ maka ịkwụ ụgwọ crypto
N'agbanyeghị ụfọdụ nsogbu mbụ, ọ dị ka anyị eruola isi mgbe ọ bịara n'ihe agụụ maka iji cryptocurrencies dị ka isi iyi nke ịkwụ ụgwọ. Azụmaahịa maara oke mkpa ọ dị ịnọgide na-adị mkpa dị ka iberibe usoro okike nke ịkwụ ụgwọ site na ịnakwere usoro ịkwụ ụgwọ ọzọ na ndenye ọpụpụ na-emeghewanye echiche maka ịnakwere cryptocurrencies, n'usoro na agụụ na-arịwanye elu.
Ugbu a 6% nke azụmaahịa dị n'ịntanetị na-anabata cryptocurrencies (elu 9% na US), mana 15% ọzọ nwere ebumnuche ịnabata ha n'ime afọ abụọ na-esote. 250% a buru amụma na mmụba nke nnabata nnabata bụ nke kachasị elu na usoro ịkwụ ụgwọ ọ bụla ọ bụla, tupu ịkwụ ụgwọ ndenye aha (156%), kaadị iguzosi ike n'ihe (127%), na site na ngwa mkpanaka (116%).
Mana ịdị njikere ịnabata cryptocurrencies dị ka usoro ịkwụ ụgwọ na ikike ịme ya abụghị otu; Ọ bụrụ na cryptocurrencies ga-agbaji dị ka nhọrọ ịkwụ ụgwọ nhọrọ ọzọ, dị ka data anyị na-atụ aro, mgbe ahụ, ụlọ ọrụ kwesịrị ịtụle ka ha tinye nnabata nke ọma na ndekọ ego ha nke ọma, na-emebighị usoro ịkwụ ụgwọ dị ugbu a. nwere ike inabata.
Njem a na-amalite site na mmekọrịta ya na ndị na-eweta ọrụ ịkwụ ụgwọ kwesịrị ekwesị nke na-enye ọrụ akaụntụ ahịa nke gụnyere cryptocurrencies n'ime usoro ịkwụ ụgwọ ya dị. Site na ndị na-enye ọrụ ịkwụ ụgwọ ziri ezi, ndị ahịa nwere ike ịnakwere ọtụtụ ụzọ ịkwụ ụgwọ ọzọ site na otu, njikọta dị mfe; Gụnyere cryptocurrencies dị ka Bitcoin na ngwakọta ịkwụ ụgwọ bụ ụzọ kachasị dị irè iji tinye ego Bitcoin na ndenye ọpụpụ.
Otu esi anabata cryptocurrencies
Skrill Ndenye ọpụpụ bụ otu n'ime ndị integrations na awade ahịa a mma. Site na ijikọta Skrill ndenye ọpụpụ, azụmahịa na ntanetị nwere ike ijikọ ọtụtụ narị ụzọ nkwụnye ụgwọ na ndenye ọpụpụ ha n'otu oge enwere ike ịhọrọ ma wepụta ya site na ngwaọrụ akaụntụ ahịa ha; na ike ịnabata cryptocurrencies gụnyere na nhọrọ ndị a.
Ya mere, site na njikọ a na nhọpụta nke cryptocurrencies, ndị na-ere ahịa n'ịntanetị nwere ike itinye ego ngwa ngwa dịka Bitcoin n'ime ụzọ nkwụnye ụgwọ ha nabatara, nke mere na nnabata ha nke usoro ịkwụ ụgwọ ọdịnala ma ọ bụ ụzọ ndị ọzọ adịghị emebi.
Site na echiche ndị ahịa, iji cryptocurrencies akwụ ụgwọ anaghị adabere na onye ahịa nwere ike ịnabata ya. Kama nke ahụ, ha lekwasịrị anya n'inwe ike iwere akụ na ụba ha nwere na pọtụfoliyo ha ma tinye ya n'ọrụ site na iji ha eme ihe n'ụwa n'ezie.
Otu usoro iji mee nke a bụ inye ndị ejiri obere akpa ego nhọrọ iji jikọta akaụntụ ha na kaadị akwụgoro ụgwọ. Yiri kaadị akwụmụgwọ jikọrọ na obere akpa dijitalụ, nke a na-enye ndị na-ejide ego nkwụnye ego ohere ịzụta ihe site na iji ọdịnaya nke akaụntụ ha ozugbo na-enweghị itinye ego ha na ego ọzọ, nke nwere ike ịbụ usoro ogologo.
Na mbido ọnwa a, anyị kwupụtara kaadị na-ewepụta mmekọrịta na Coinbase nke na-enye ndị na-ejide akaụntụ Coinbase na UK aka ime nke ahụ. The Coinbase debit kaadị na-agbanwe ego ozugbo na ego ego mgbe ejiri ya ma nwee arụmọrụ niile nke kaadị akụ ọdịnala, nke pụtara na ndị ahịa nwere ike ịme ndị na-enweghị kọntaktị ma ọ bụ EMV (Chip & Pin) kwupụtara ịkwụ ụgwọ na onye ọ bụla. , yana ịmepụ ego na akaụntụ Coinbase na igwe ndọrọ ego. Ndị na-eri ihe nwekwara ike ịkwụ ụgwọ na onye na - akwụ ụgwọ n'ịntanetị ọ bụla nabatara kaadị akwụmụgwọ na kaadị debit.
Kaadị debit Coinbase, nke ga-adị maka ndị na-edekọ akaụntụ na ndị fọdụrụ na Europe n'oge kwesịrị ekwesị, jikọtara ya na ngwa mkpanaka nke na-enye ndị ahịa ohere ọ bụghị naanị ịhọrọ cryptocurrency ha chọrọ imefu, kamakwa na-enye ndị ọrụ itinye nchịkọta, akwụkwọ nnata na ọkwa iji gwa ha nke ọma gbasara etu esi azụ ahịa ha na mmefu ego ha.
Uru nke ụdị kaadị akwụgoro ụgwọ bụ na ụlọ ọrụ adịghị mkpa iburu n'uche cryptocurrency na igbe ya n'ụzọ ọ bụla; Dika agbanwere ego n’ego di n’ego tupu amalite ahia a, odighi ihe ozo choro karie inabata ugwo kaadi VISA, mee ka ihe ahia a buru nke kachasi uru nye ndi ahia.
Site na ụlọ ọrụ ịkwụ ụgwọ ọzọ na nke na-echepụta, dịka Skrill Fast Cash Box na Coinbase Debit Card, ndị na-eweta ọrụ ịkwụ ụgwọ ụlọ ọrụ dịka Paysafe na-agbanwe agbanwe cryptocurrencies ịbụ ngwaahịa ngwaahịa ma ọ bụ ụlọ nkwakọba akụ nke akụnụba wee gaa na ezigbo ụwa. Ọ bụ ezie na anyị ka dị anya site na ịhụ cryptocurrencies mkpọsa ebe niile dị ka a nabatara na ụlọ ahịa ma ọ bụ n'ịntanetị, arụmọrụ ndị na-enyere ịzụrụ na Bitcoin na-abịa.
O doro anya na ịkwụ ụgwọ ego ndị a, nke agụụ na-arịwanye elu nke ndị na-azụ ahịa na azụmaahịa na-azụ ahịa cryptocurrencies, ga-aga n'ihu na-agbanwe ma na-ewu ewu ka ha na-abanye na ịmara ọha na eze na iji cryptocurrencies eme.
Offọdụ ihe ịma aka na Bitcoin kpọmkwem, ọkachasị na ọ nwere ike, nwere ike igbochi nnabata ya, nke mere na anyị kwenyere na ndị na-akwụ ụgwọ nwere ike iweta ihe ngwọta maka ojiji zuru oke nke ịkwụ ụgwọ cryptocurrency, na mgbakwunye na ndị na-ahụ maka ịntanetị na kaadị akwụmụgwọ.
Mgbanwe ego bara uru n'ụdị ego na ego abụwo ihe dị mkpa kemgbe ụwa. Naanị ihe ọ na-eme bụ ọdịiche n’etu ụdị si agbanweela kemgbe ụwa. Usoro mgbanwe ohuru agbanweela udi ka teknụzụ emeela oge. Mana ngwa crypto enwere ike ịgbanwe ọdịnihu nke ịkwụ ụgwọ dijitalụ?
Cryptocurrency bu uzo mgbanwe dijitalụ eji eji ego. Ike mkpuchi nwere ike igbochi nghota, agbanweghi agbanwe na nhazi.
Ihe mkpuchi a na-ejikarị ikike etiti etiti ma daa n'okpuru gọọmentị. Ọ bụ usoro dị irè nke uru bara uru, a ga-eziga ya n'etiti mmadụ abụọ, ma ọ bụ naanị ya ma ọ bụ iji ngwọta ọha na eze.
O nwere ike isi ike iziga ma nata nnukwu ego, nke mere na cryptocurrencies bụ ihu ọhụụ nke ego na azụmaahịa gị.
Ndị mmadụ gburugburu ụwa na-eji usoro nke cryptography, ọ dịkwa oke uru ọ bara uru. Site n'enyemaka nke ego crypto-ego, enwere ike ịgbanwe ego ngwa ngwa. Cryptocurrency bu n 'odinihu nke ugwo dijital, ya mere nwere mmetuta siri ike na usoro aku na uba uwa.
N'isiokwu a, anyị ga-atụle isi ihe gbasara uru nke cryptocurrencies na ihe kpatara ọ nwere ike ịbụ nnukwu uru maka ụlọ ọrụ na azụmaahịa. N'isiokwu a, ị ga-ahụ etu azụmaahịa na iji Bitcoin ga-akwado ndị ọrụ azụmaahịa n'oge na-adịghị anya.
Ebee ka ịmalite na Cryptocurrency?
Cryptocurrency bu uzo iji gbanwee usoro ego gi na Bitcoins. Ọtụtụ ụlọ ọrụ na-eme mgbanwe maka usoro cryptocurrency maka uru ịkwụ ụgwọ ngwa ngwa na enweghị ego.
Bitcoin bụ isi ụdị ego na-agụnye ọrụ niile dịka nhazi azụmahịa, nkwenye nke netwọkụ kwesịrị ịkwado. Ndị a Bitcoins na-kere digitally site na Ngwuputa usoro, na ha na-mkpa nnọọ oru oma ma dị ike kọmputa ịkọwapụta crunchy nọmba, na algọridim.
A na-ekepụta bitcoins 25 nkeji iri ọ bụla. Ego Bitcoins dabere naanị na ndị na-etinye ego na ihe ha dị njikere ịkwụ n'oge ahụ. O doro anya na ọ bụ ụzọ dị irè iji azụ ahịa ego, ma ọ bụrụ na ị nwere ego nke bitcoins, ị gaghị enwe ike iweghachi ha.
Ndị mmadụ n'otu n'otu nwere ike iji nkwekọrịta mara ihe ma bulie mmekọrịta ndị ọgbọ ebe ha na-enweghị isi mara ibe ha.
Nnukwu ụlọ ọrụ dị ka Expedia, eBay, na Microsoft na-eji cryptocurrency n'ihi na ọ ga-abụ ọdịnihu nke opekata mpe afọ iri na-abịanụ.
Bitcoin bụ naanị ọdịnihu n'ihi na ego ego ga-emesị kwụsị uru ha bara n'ihi mbipụta dị elu. Enwere ike maka ego ego iji daa na efu na enweghị isi.
Enwere ohere ọdịda, na otu mba nwere ike ịdaba na akụ na ụba. Cryptocurrency bu ego kwesiri ekwesi, na-ebelata onodu udiri wayo nile. Enwere ike ịchọta njirimara nke ngwaahịa ahụ site na enyemaka nke teknụzụ blockchain.
N'ihi ịrị elu nke wayo na iyi egwu n'ịntanetị nke siri ike na azụmaahịa, Cryptocurrency enwetabeghị mmata ọzọ. Ndi ochichi ji nke nta nke nta abanye na echiche nke Bitcoin. Enweghị ego site na Bitcoin na ịkwụ ụgwọ niile na-eme nke ọma.
Kedu ihe kpatara iji Bitcoin?
Ọ bụ ihu ọma a dijitalụ ego na-kere na 2009. Bitcoin balances na-nọ na a ọha ledger na dị na ígwé ojii. Enweghị gọọmentị na-akwado Bitcoins, ha dịkwa obere uru karịa ngwaahịa.
Chaatị Bitcoin na-ewu ewu nke ukwuu, nke ahụ edugala na mwepụta nke ọtụtụ ego ndị ọzọ na ikpo okwu mebere, a makwaara ha dịka Altcoins. Ọnụ ego nke Bitcoin dabere na oke nke netwọkụ ma sie ike karị.
Ọnụahịa Bitcoins ga-abawanye dịka ọnụahịa nke mmepụta. Nchịkọta nke nkesa ike nke netwọk Bitcoins na-egwupụta akụ bụ ihe a maara dị ka ọnụego hash, nke na-ezo aka ugboro ole na sekọnd nke netwọk nwere ike ịnwa ịmechaa ihe omimi ahụ tupu mgbochi ahụ agbakwunye na Blockchain.
Mkpụrụ ego ọgbọ ọhụrụ
Tdị ego nke ndị mmadụ na-eji eme ihe mgbe niile n'ihi nnyefe ngwa ngwa na ụzọ ọrụ. Yabụ, inye ego na ịkwụ ụgwọ dị mkpa iji kwụọ ụgwọ. Cryptocurrency ka bu echiche nghotahie, dika ndi mmadu na-adabere na mbufe ego.
Otú ọ dị, ngwa ndị dị ka Square, Circle, na Revolut abanyela ịzụta na ire nke ego crypto-ego. Kwesịrị ịmatakwu banyere ụdị amamịghe azụmahịa nke kachasị mma nke ga-ekwe omume site na ọnụ ụzọ ma nwee ike ịdọta ndị ahịa ọhụrụ site n'oge ruo n'oge.
Ngwa ndị a dị n'ịntanetị na-enyere aka ịkwụ ụgwọ na ịzụta site na ego mebere yana ịdebekwa ahịa cryptocurrency site na otu ngwa. A na-eji akara ngosi dijitalụ a tụnyere ego a na-akwụ ụgwọ ma yọọkwa nke ọma yana n'ihi nke a, ụdị onye ọrụ ọhụụ na-adọrọ mmasị na ahịa cryptocurrency.
Ulo oru di n'ihu inabata ya dika ohere ma hu na inyefe ego / nkpuru ego kariri ngwa ngwa.
Ekwentị ego cryptocurrency
Ga-anụrịrịrịrị ọrụ dị ka PayPal, ụgwọ gam akporo, na ụgwọ Apple na-akwụ ụgwọ na kredit na debit kaadị. Ma ọ bụrụ na ị nọ na Blockchain mgbe ahụ ị nwere ike iji obere akpa ego ezoro ezo na ha ekwesịghị ijikọ na akaụntụ ọ bụla ọzọ, na mgbakwunye na ịdị mfe nke iji kaadị akwụmụgwọ.
Akpa-akpa bụ ụzọ ngwa ngwa, dị mfe ma dịkwa ọnụ ala iji jiri ego gị. I nwere ugwo ezoro ezo nke na-enye obere akpa mkpanaaka ebe ndị ọrụ nwere ike ijikwa ma chekwaa mkpụrụ ego ha.
Ọ bara uru ma dị mfe maka ndị ọrụ iziga na nata ọnụọgụ ha site na Bitcoin ma enwere ụzọ iji gbanwee pound na euro na atụmatụ ngwa bitcoin. Ọ dị mfe ma dị mfe n'ihi na mmadụ nwere ike ịhọrọ ịkwụ ụgwọ site na bitcoins ọbụlagodi na ndị ahịa na-anabata ego fiat.
Mmemme ọhụrụ na-etinye kaadị debit maka bitcoins yana mmemme agụmakwụkwọ ndị ọzọ. Lọ ọrụ dịka Cryptopay wetara ụlọ akụ Bitcoin na ọkwa azụmaahịa zuru ụwa ọnụ.
Borderkwụ ụgwọ ókèala
Otu n'ime ihe kachasị mkpa nke azụmahịa na-agafe ókè bụ cryptography na blockchain. Site na ngbanwe nke ngọngọ, nyiwe ndị a nwere ike inyocha nnyefe azụmahịa na azụmahịa na ezigbo oge.
N'adịghị ka azụmahịa azụmaahịa ndị ọdịnala, a na-agakarị ndị a site n'ụlọ mkpocha na usoro ịkwụ ụgwọ dị iche iche. Yabụ, dị ka inyefe blockchain na-eme n'ime sistemụ, enwere ike mezue azụmahịa ngwa ngwa karịa nke ọ bụla.
N'ịbụ ezigbo akụkụ dị iche iche, ngọngọ nwere ike ịdị mfe ijikwa yana ndị na-enye ọrụ nwere ike belata ọnụahịa nke arụmọrụ.
Ọzọkwa, Bitcoins na-ezigakwa nzipu nke na-egosi ọnụọgụ obodo na ndị ọrụ mbugharị ebugharị. Ndị ọrụ nwere ike izipu ego ha n'ụlọ jiri usoro ngọngọ ma nke ahụ dị ọnụ ala karịa Western Union.
Ajụjụ nke nchekwa
Mgbe ị na-enweghị ego, ohere nke idobe ego gị na nchekwa ka ukwuu n'ihi na anụ ahụ nwere ike ifu ma ọ bụ zuru. Ndị ọrụ na-eji ego eme ihe nwere nchekwa na nchekwa n'ihi na ọbụlagodi na ha tufuo ekwentị ha, ego ha dị na nchekwa na obere akpa ha. A na-echekwa obere akpa mkpanaka site na ọtụtụ nchekwa.
A na-etinye nchebe na ngwa ahụ na usoro nchebe nke ekwentị ka ego wee dịrị na igwe ojii.
Ọ bụ ezie na a ga - enwe nsogbu ụfọdụ na ntanetị data, ike nke nchekwa karịrị ike ndị cybercriminal. Ndị ọrụ Bitcoin adịghị mkpa ikpughe ezigbo njirimara ha iji nata ma ọ bụ zipu bitcoins.
Azụmahịa niile dị mfe ịchọta site na ngọngọ. Site na mmụba kwesịrị ekwesị, gọọmentị na-achịkwa ọrụ ndị na-egbochi igbochi ya. Nchebe bụ nnukwu nchegbu mgbe ọ na-abịa azụmaahịa ego yana ya mere ngọngọ nwere ike ịnye ahụmịhe njirimara na ntụkwasị obi na-enweghị nsogbu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » eCommerce » Cryptocurrencies na usoro ugwo ohuru